Taariikhda Shirkadda - Sichuan Zili Machinery Co., Ltd
·In 2002, shirkadda our aasaasay oo loo yaqaan Sichuan Ziyang Zili hadhuudh iyo Saliida Co., Ltd, waxaan bilaabay horumarinta iyo wax soo saarka ee waalka rotary iyo laba-jid valves leexiyo.
·Sannadkii 2003, waxaanu ku guulaysanay 3 qandaraas oo ka yimid 3 shirkadood oo waaweyn oo wax soo saarka daqiiqda ah oo ku yaala Shiinaha, waxaana aanu gaarnay iibka 1.2 milyan RMB. Iyagoo jabinaya heerka ay marayeen inta badan shirkadaha hadhuudhka iyo kuwa saliida ee keena dayuuradaha iyo alaabada kala weecida ee dibada ka keena.
·Sannadkii 2004tii, valve rotary-gayagu waxa uu gaadhay horumar wayn kaas oo isticmaalaya xajmi dibadeed si loo xalliyo dhibaatada daadinta budada ee dhibka ku haysa saaxiibada gudaha sanado badan. 2004, waxaan gaarnay qadar iib ah 4 milyan RMB.
·2005, waxaan gaarnay qadar iib ah 6 milyan RMB.
·2006, waxaan ballaarinay awooda wax soo saarka waxaana helnay iib 12 milyan RMB.
·2008, waxaan sii wadeynaa ballaarinta wax soo saarka. Waxaan si tartiib tartiib ah u furnay suuqyo dibadda ah, waxaan u iibinay alaabadayada Indonesia, Filibiin, Malaysia iyo dalal kale iyada oo loo marayo shirkadaha dhoofinta. Bishii Juun isla sanadkaas, waxaan ka helnay jawaab celin macaamiisha waxaa jiray dhibaatooyin alaabta. Hogaamiyayaashayadu aad bay fiiro gaar ah u yeesheen waxayna si degdeg ah dib ugu yeereen 300 oo nooc oo badeecado ah oo la soo raray waxayna ku beddeleen alaab cusub oo macaamiisha ah. Waxaan si adag u aaminsanahay in macaamiisha marka hore, tayada ugu horeysa.
·Sannadkii 2010, waxaanu sii wadnay inaanu ballaadhino awoodda wax-soo-saarka, waxaanu bilownay inaanu dhisno warshadeena warshadeed, waxaanu soo saarnay qalabka wax lagu xidho ee saliidda-free-ka ah. Oo waxay heshiisyo iskaashi la saxeexdeen kooxda Yihai Kerry ee gudaha iyo COFCO. Waqtigaas, badeecadayada ayaa gabaabsi ah waxaana la gaaray qadar iib ah 18 milyan RMB. .
·Sanadkii 2012, dhismaha warshadeena ayaa la dhameeyay, waxaana gaadhnay 26 milyan oo RMB iib ah.
·2013, waxaanu kordhinay maalgashiga R&D iyo hawlgalada, si joogto ah ayaanu u cusbooneysiinay alaabtayada, waxaanu helnay dufcaddii ugu horeysay ee lacagaha taageerada dib-u-habaynta tignoolajiyada qaranka, waxaanu aasaasnay ​​khadka wax soo saarka ee CNC, waxaanu sii wanaajiyey tayada iyo saxsanaanta alaabteeda. Isla sanadkaas, 32 milyan yuan ayaa lagu iibiyay aaladda rotary valve iyo valve laba-geesoodka ah.
·Sannadkii 2014, alaabtayada hal-abuurka leh waxay heleen shahaadada patent model utility qaranka, waxay ka gudbeen dib u eegista ganacsiga teknoolojiyadda sare ee qaranka, waxayna heleen maalgelintii mashruuca hal-abuurka sayniska iyo tignoolajiyada ee dawladda ee ugu horreysay. 2014, shirkadu waxay heshay dakhli iib ah oo dhan 36 milyan RMB.
·Sannadkii 2017, waxa si guul leh naloogu diiwaan geliyey Tianfu (Sichuan) Guddiga Maaliyadda Farsamada ee Xarunta Is-dhaafsiga Sinaanta Wadajirka ah. Bishii Luulyo, waxaan helnay shahaadooyinka shatiga hawlgalka dhoofinta waxaanan ka gudubnay dib u eegista ganacsiga tignoolajiyada sare ee qaranka. Oo lagu gaadhay iibka 38 milyan RMB..
·2018, waxaan helnay shahaadada CE oo aan aasaasnay ​​Waaxda Ganacsiga Caalamiga ah. ganacsigeena ayaa si rasmi ah loogu ballaariyay suuqyada Yurub iyo Ameerika waxaana lagu gaaray natiijooyin cajiib ah. Waxa la gaadhay 50 milyan RMB qadar iib ah
·2019, waxaan u bedelnay magaca shirkadeena Sichuan Zili Machinery Co., Ltd waxaana gaadhnay qadarka iibka 56 milyan RMB.
·Sannadka 2020, waxaanu dejinay qorshaheena cusub ee shanta sano ah: iyadoo lagu salaynayo cilmi baadhista iyo horumarinta iyo iibinta alaabada hawada rotary ee jira iyo laba-jid oo kala weecinta alaabada, baaxada ganacsigu si tartiib tartiib ah ayey u korodhay si ay macaamiisha u siiso budo iyo qayb ka mid ah naqshadaynta injineernimada gudbinta pneumatic. .
3-Way weeciye Valve, valve rotary, quudiyaha rotary, hawo xidhid, Xakamaynta Elektarooniga ah, 3 Way Ball Valve,